Kuyo yonke intsapho kukho isilwanyana, isintu asikwazi ukwenza ngaphandle kwexesha labameli belizwe lezilwanyana ebomini babo. Iiprotro ezinamandla zihlala kwindawo ethile ebomini babantu, kodwa oko kubangele abantu kule ntaka. Ewe, iifumpu zazo kunye nekhono lokwenza i-onomatopoeia. Iiproti ze-Wavy zithandana kakhulu, ziba ngamalungu entsapho ngokwenene.
Ukutya nokunyamekela iiproti ze-wavy. Iiproroti zifumene intsapho, ziziphatha ngokuhlukileyo. Bafuna ukunakekelwa ngokukhawuleza nokutya okufanelekileyo ekuqaleni. Njengazo zonke izilwanyana zezilwanyana ezidinga ukutya: iiprotheni, amafutha kunye ne-carbohydrates. Ukuphuculwa ngcono, iiVithamini, ukulandelela izinto, iiminerali zifunekayo. Konke oku kuqulethwe ukutya okuhlukahlukeneyo, iziqhamo kunye nemifino.
I-millet yaseSenegal ifanelekile kwiiprototi ezincinci ngokubonga ngamanqatha amancinci. Ngenxa yesondlo sayo, i-oats yinto yokutya ebalulekileyo, iqukethe iivithamini B kunye noC.
Ingqolowa ngenxa yobunzima bezinkozo ayikhuthazwa ukuba idle njengeiproti.
Ilayisi ayinayo impawu ebalulekileyo yokutya iiproti, kodwa ukubuyisela amandla xa ugula, kwifom ephekiweyo inika umphumo omuhle.
Ummbila we-corn wavy i-parrots afana nokutya kwifom ekhulileyo.
Imbewu yokudla iyadliwa ngokuzonwabisa ngama-parrots, kodwa kuba kukho izinto ezinobuthi kuyo, kubalulekile ukuba unike isilwanyana sakho ngokufanelekileyo.
Ukutya okusanhlamvu okusanhlamvu ngesimo se-oats esingavuthiyo kunye nengqolowa kunye nokuzonwabisa kufumana zonke iintlobo zeproti.
Iingqolowa ezihlumayo kukutya okulungileyo kakhulu kwiiproti ezincinane. Ukutya okuvela kwimbewu ehlumayo kufuneka kuhlolwe ngenyameko ukuze kungabi yi-moldy.
Izityalo kunye nefowuni eluhlaza . Ukuze uphuhliso olungcono lwe-parrot, kufuneka wenze ukutya kwansuku zonke kweziqhamo kunye nefowuni eluhlaza. Ii-apula, iipereyiti, ii-oranges, iibhanana zinikwe kwiinqununu ezinkulu. Amajikizi anika ngokupheleleyo. Iiprototi ezininzi ziyakuthanda imifuno. Njengokutya okuluhlaza, baya kuza kwiindawo eziluhlaza ezahlukeneyo ukusuka kumyezo.
Ukutywala kwezilwanyana. Ukutya kwesilwanyana esiqhelekileyo yiqanda elinzima elibilisiweyo, xa linyelwa kwisondlo seentaka.
Ukutya kwabantu. Unako ukunika i-parrot cheesecake kunye ne-sausage, kodwa ubuncinane.
Ukutya okuxubileyo. Kwiindawo zokugcina izilwanyana ezinamhlanje, iithalafu zigqitywa ngeendidi ezahlukeneyo zeentaka. Kodwa akusoloko le mi mix komovymi enjengama-parrots ngokwabo. Kumele ukhethe ukutya okufanelekileyo kwintetho yakho kunye nezondlo, ngokukodwa kwisilwanyana sakho.
Ukunyamekela imihla ngemihla. Ukugcina ii-parrots ze-wavy endlwini, kufuneka ufumane ukushisa okuqhelekileyo kwigumbi apho ubeka khona ipaki nge-parrot. Nangona i-parrot ixhomekeke kwi-house, umntu akavumelekanga ukuba avumele iiprojekti. Isiqulunqo sinokugqithisa i-parrot, ukwenzela ukuba kubanda. Ukuba awukwazi ukukhusela i-parrot evela kwidrafti, nge-hewa, gubungela i-cage ngento efudumeleyo.
Ukusela amanzi kwi-parrot kufuneka kutshintshwe imihla ngemihla, ungavumeli amanzi amanzi kwisitya samanzi. Kwakhona, imihla ngemihla kufuneka uhlambulule umgcini wesondlo kwi-husks ye-corn, emva koko emva kokudla ukutya okutsha.
Ukuhlamba . Uninzi lwamaproti adibanisa ngamanzi. Kodwa amaxesha amaninzi ama-budgies afana nokuhlamba ngotshani. Ukuze wenze oku, kufuneka uhlambe uzele utshani, kwaye baya kuguqula kuyo. Nama-parrots e-wavy athande kakhulu ukuhlamba kwisitya kwi-watering can, ngexesha lehlobo ephuma kumanzi ukususela ngamanzi atshisayo, kubanika uvuyo olukhulu.
U kucoca i cage. Iiselithi zama-parrots zama-wavy kufuneka zihlambuluke ngeveki, zihlanjululwe ngokupheleleyo lonke itampu kwaye zitshintshe i-litter.
Ukuncinwa kwamacwecwe. Ukuqhafaza iiflethi, kufuneka uthenge izikhewu ezikhethekileyo, ezisetyenziselwa ukuhlawula izilwanyana kwizilwanyana. Xa ukhetha izihlunu, kufuneka uqaphele ukuba ungalimazi imithwalo yegazi kwimigqomo. Nangona iiparaketi ze-wavy zibonakala ngokucacileyo. Ukuba ngokukhawuleza, usalimaza umkhumbi wegazi, ngoko kufuneka umiswe ngoboya bekotoni obunamanzi entsimbi.
Isipho esihle kakhulu somntwana: uCorella Nymph
Indlela yokufundisa i-parrot ukuba idada?
Ukutya okuphezulu kweekhalori zezinja
Ukuzalwa kweenja zaseRhodesian Ridgeback
Kwifashoni ibonisa uYudashkin Anna Semenovich walahleka i-mink coat
I-intestinal microflora ithintela isimo sempilo
Ukubhaka kwieshizi kunye namazambane
Iphupha liphi iphupha?
Uthando oludlulileyo luya kuba lusizi oluzayo
Isaladi kunye neentambo ze-crab kunye nerandi
Iipancakes ngeengulube eziqwengwe
Ikhumba ihamba ngehovini
U-Ashley Simpson: amaqiniso angama-12 e-stellar life
Imayonnaise ebisi ngaphandle kwamaqanda
Udokotela uDavid Duchovny
Ukupheka inyama ngesiNgesi